News - ၂၀၂၀ သည်အထူးနေ့ဖြစ်သည်။ COVID-19 သည်ကမ္ဘာအနှံ့ပျံ့နှံ့နေပြီးယခုနှစ်အစပိုင်း၌ဖြစ်သည်
မမျှော်လင့်ဘဲ ၂၀၂၀ သည်ထူးခြားသောနှစ်ဖြစ်သည်။ COVID-19 သည်ကမ္ဘာအနှံ့ပျံ့နှံ့နေပြီးယခုနှစ်အစပိုင်း၌ဖြစ်သည်။ တရုတ်လူမျိုးအားလုံးသည်ထူးခြားသောတိတ်ဆိတ်သောနွေ ဦး ရာသီပွဲတော်ကိုကျင်းပကြသည်။ စားသောက်ပွဲများ၊ ဈေးဝယ်ထွက်ခြင်းများမရှိ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်ဆွေမျိုးများထံလည်ပတ်ခြင်းမရှိ။ ဒါဟာအရင်ကနဲ့သိပ်ကွာခြားတယ်！
အိမ်မှာရှိနေတုန်းကျွန်တော်တို့အရမ်းစိုးရိမ်ခဲ့တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နွေ ဦး ရာသီမကျင်းပမီလေးမှာတင်ကြီးမားတဲ့စီမံကိန်းကိုငါတို့လက်မှတ်ထိုးရတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်သည်မမျှော်လင့်ဘဲဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ကြောင့်နောက်ကျခြင်းမရှိချေ။ ထို့ကြောင့်အလုပ်စတင်ချိန် မှစ၍ ၀ န်ထမ်းအားလုံးသည်ဖြန့်ဝေသည့်အချိန်နှင့်အမီလိုက်နိုင်ရန်အတွက်နေ့တိုင်းအလုပ်များနေပြီးအလွန်အလုပ်များကြသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမအပိုင်းကိုလုပ်ပြီးသည်။ ဗုံဗလာ ၄ လုံးသည်သယ်ဆောင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ ကြည့်ရှုလော့။ အလွန်တင့်တယ်လှ၏။ Stamina ၀ န်ထမ်းများအားလုံးဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာဖြင့်ရွှေရောင်တောက်ပမှုနှင့်အတူမျှဝေခြင်း! ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူသည်အလွန်ဝမ်းမြောက်စွာပါ ၀ င်သည်။ QC အစီရင်ခံစာမှအချက်အလက်များအားလုံးသည်အရည်အချင်းပြည့်မီကြောင်း၊ တစ်လအတွင်း၎င်းတို့ရရှိနိုင်သည်၊ အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်သည်။ 50pcs ကျော်ပြီးစီးရန်ကျန်ရှိနေသေးသည်။ COVID-19 သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလွှမ်းမိုးနေဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်သမားများမှာမလုံလောက်ပါ၊ အားလပ်ရက်နောက်ပိုင်းအလုပ်သမားများစွာသည်မည်သည့်အန္တရာယ်မှရှောင်ရှားရန်အိမ်မှထွက်ခွာနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကအရမ်းကိုယုံကြည်မှုရှိတယ်၊ ထိရောက်တဲ့စုစည်းမှုကိုလုပ်ဖို့ထိရောက်တဲ့ jigs တွေကိုဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့တယ်။ လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးချောမွေ့ပြီးကျွမ်းကျင်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများသည်နေ့စဉ်အလုပ်ရှုပ်နေသော်လည်းငြီးငွေ့ခြင်းမရှိကြပါ။ ကုမ္ပဏီသည်အလုပ်သမားများကိုပိုမိုသက်သောင့်သက်သာရှိသည့်ပတ် ၀ န်းကျင်ဖြစ်စေရန်၊ အရသာရှိသောဟင်းလျာများနှင့်ကော်ဖီနှင့်သရေစာများကိုချိုးဖဲ့သည်။
ပြီးပြည့်စုံသောဗုံများကိုပြန်ကြည့်ပါ၊ ၎င်းတို့သည်ချွတ်ယွင်းချက်မရှိချေ။ အဖွဲ့သည်မည်မျှခိုင်မာသည်! ၎င်းသည်အလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊